Warbixin:- Guddoomiye Jawaari oo galay qalad siyaasadeedkiisii ugu weynaa – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Warbixin:- Guddoomiye Jawaari oo galay qalad siyaasadeedkiisii ugu weynaa
Gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa galay qalad siyaasadeedkiisii ugu weynaa kadib markii uu kasoo dhex muuqday xildhibaanno ka dalbanaya Ra’iisul wasaare Kheyre dib ugu laabashada golahiisa wasiirada cusub.
Dadka falaqeeya arrimaha siyaasadda ayaa qaba in qaladkaan uu yahay mid aan laga fileyn mas’uul haya xilkaan oo kale inuu kula dhaqaaqo ra’iisul wasaare soo magacaabistiisa talo uu ku lahaa.
Axmed Cali Xuseen, waa siyaasi ku taqasusay maareynta hay’adaha dowliga ah, waxa uuna waraabhinta Bulshoweyn u sheegay in qaladkaan aanu marnaba kasoo kabsaneyn Jawaari, ayna adag tahay in dib loo saxo.
“Jawaari ma ahayn inuu kamid noqdo xildhibaannada diiddan xukuumadda, waayo Baarlamaanka dhan ayuu u yahay gudoomiye, Jawaari waxaa looga baahnaa oo kaliya inuu ra’iisul wasaaraha talo wanaagsan siiyo kahor magacaabista xukuumadda” Ayuu yiri Axmed Cali.
Xildhibaan Saalax Axmed, isna waxa uu ka tirsan yahay golaha shacabka, axa uu sheegayaa in la yaab ay la noqotay markii uu arkay xildhibaanno uu horkacayo Jawaari oo qoraal u gudbiyey Ra’iisul wasaaraha.
Jawaari ayuu sheegay inuu ahaa shaqsiga labaad ee dalka ugu sarreeya, loona baahnaa inuu si hoose talo usiiyo ra’iisul wasaaraha.
“Jawaari wixiisa waxay ahayd cago jugleyn, waxa uu doonayey oo kaliya inuu beeshiisa wax u helo, shalay markii lasoo magacaabayey golaha wasiirada waa uu la socdaye muxuu uga hadli waayey” Ayuu yiri xildhibaanka.
Dad badan ayaa qaba in qalad siyaasadeedka uu galay Jawaari lagu sixi karo oo kaliya iyadoo mar kale gudoomiyaha uu caddeeyo inuu gudbinayey aragtida xildhibaannada, balse aaney midiisa gaarka ahayn.
Qoraal ay soo saareen golaha shacabka ayaa looga dalbaday ra’iisul wasaare Kheyre inuu dib ugu laabto golihiisa wasiirada, waxaana qoraalkaasi ku saxiixan 105 mudane.